Laamaha amniga gobolka Mudug oo baaritaano ku haya dad lagu soo qabtay hawlalladii Gaalkacyo ay laga fuliyay. – Radio Daljir
Laamaha amniga gobolka Mudug oo baaritaano ku haya dad lagu soo qabtay hawlalladii Gaalkacyo ay laga fuliyay.
Agoosto 3, 2012 6:47 b 0
Gaalkacyo, Aug 03 -? Saraakiisha amniga iyo maamulka Mudug ayaa baaritaano xooggan ku haya dad dhawaan laga soo qab-qabtay xaafadaha magaalada, kadib Hawl- gallo ammaan sugida oo ay ciidanku labadii todobaad ee ugu dambeeyay ka wadeen gudaha magaalada.
Baaritaanadan lagu kala saarayo dadkii ay soo xir-xireen ciidanka oo soo biloowday labadii maal-mood ee u dambeeyay ayaa la doonayaa in lagu kala saaro danbiilayaasha looga shakin karo inay ku lug leeyihiin xasilooni darrada iyo falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhaca Gaalkacyo.
Dad ku dhaw boqol qof oo isugu jira rag iyo haween ayay ciidanku ku soo qab-qabteen hawl-galladii Gaalkacyo ka biloowday,? bilowgii bishan barakaysan ee Ramadaan. Gudoomiyaha Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey ) oo Daljir la hadlay ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo aan waxba galabsan oo lagu khaldamay, dabadeedna lasiidaayay.
Hawl-galladan ayaa magaalada ka biloowday kaddib markii dhawaan ciidamo ka kala yimid gobollada Puntland ay kusoo qul-quleen gudaha magaalada Gaalkacyo, si ay wax uga qabtaan dhibaatada amni-daro ee ka jira gobolka Mudug.
C/risaaq Cali ‘Silfar’
Tifaftiraha guud ee Radio Daljir C/fitaax Cumar Geeddi oo caawa ka badbaaday isku day dil.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliim oo ay dugsiyada sare ee Puntland ku tartamayaan oo wareegii labaad u gudbaya